Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 30, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Mafomu eemail yeruremekedzo nyanzvi yekukutendai
Pakati petsamba nea tsamba nyanzvi, pane zvimwe zvinoonekwa zvakafanana. Ivo vanocherechedzwa pamwero wemaitiro ane hunhu. Zvisinei, izvi hazvisi nguva dzose zvakafanana. Kana iwe uchida kutumira email yehunyanzvi kune waunoshanda naye, mutengi kana waunoshanda naye, pane mashoma ekutaura ane hunhu. Tsvaga mune ino chinyorwa, zvese zvaunoda kuziva nezvazvo.
Tsamba yehunyanzvi uye courier: ndeipi misiyano?
Kana paine chinhu chimwe chete icho email uye mutumwa vanogovana zvakafanana mune yehunyanzvi mamiriro, iko kutaura kwakanaka. Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune kwakawanda kurongeka mutsamba kana tsamba kana ichienzaniswa neemail.
Izvi pasina mubvunzo zvinotsanangurwa nenyaya yekuti email inzira yekutaurirana inoda kukurumidza kutumira mameseji. Saka, hazvirambidzwe kuti mamwe matauriro ehuremekedzo akananga kune tsamba kana tsamba anowanikwa mumaemail ehunyanzvi. Asi maitiro acho ari kune kupusa uye mapfupi mafomula.
Matauriro api oruremekedzo ekutumira kutenda?
Sarudzo yeformula sezviri pachena inotsamira pamunhu watinotumira kutenda kwedu.
Kana iri semuenzaniso tsamba yekutenda mumamiriro echikumbiro chechinzvimbo, uyu mutsara une hunhu wakanyatsokodzera: "Ndinokutendai nekutarisisa kwamuchabhadhara kuchikumbiro changu / tsamba / kubvunza uye ndinokumbira kuti mutende mazviri. vimbiso yekunzwa kwangu kwakanyanya ”. Inoshandawo kana uchikumbira sevhisi kana uchikumbira.
VERENGA Shandisa email yekambani
Kukutendai nekushingaira kwakaitwa nemutori wako wenhau kana kuti nhanho dzeramangwana dzinotarisirwa kubva kune yekupedzisira, zvakakodzera kuti:
"Ndinokutendai nekushingaira kwenyu + sarudzo yenyu yeruremekedzo". Iwe unogona zvakare kupa matauriro ekuremekedza mumashoko aya: “Ndinokutendai nehunyanzvi hwenyu. + nzira ine hunhu yesarudzo yako ”.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu kana waitirwa nyasha kana kuti wakapa tsananguro kumutori wako, zvakakodzera kuti uti: “Maita basa nekunzwisisa kwenyu + nzira ine ruremekedzo yesarudzo yenyu” kana kuti “Ndinokutendai + neruremekedzo nzira yesarudzo yenyu” kana "Nekutenda kwangu, ndapota gamuchirai, Madam, Changamire, kutaura kwekunzwa kwangu kweruremekedzo".
Chero chiitiko, iwe unopihwa mukana wekushandisa akati wandei mamwe mafomula ane hunhu akachinjirwa kune maemail ehunyanzvi, zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Tinogona kutaura pakati peizvi:
Nekudaro, ramba uchifunga kuti email yehunyanzvi inogona kungotariswa seyakadaro kana yakaverengerwa uye yakacheneswa pazvikanganiso zvese zvezviperengo negirama. Uyewo, chenjerera kusadimburira mashoko acho. Izvi zvinokupa chikwereti chakawanda.
Ndeupi rudzi rweruremekedzo rwekutumira kutenda mune email yehunyanzvi? November 30th, 2021Tranquillus
pashureTumira email kune mutariri wako: rudzii rwemhando yepamusoro fomula yekushandisa?
zvinoteveraProfessional email, dzivisa zvakajairika mafomula!
Kuvandudza unyanzvi hwako hwokunyora
Regera pasina ziviso, kodzero yevakadzi vane nhumbu